#FreeBassel: Tsahoana Hosaziana Ho Faty Ilay Syriana Injeniera Informatika · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 17 Novambra 2015 6:03 GMT
Vakio amin'ny teny Español, English, فارسی, Ελληνικά, русский, Italiano, বাংলা, Deutsch, English
Niely ny tsaho fa nahazo sazy ho faty avy amin'ny governemanta Syriana ilay injenieran'ny rindrambaiko Syriana-Palestiniana any am-ponja Bassel Khartabil, fantatra amin'ny anarana hoe Bassel Safadi ihany koa.
Tany am-ponja tao Syria ity injenieran'ny rindrambaiko malalaka ity nanomboka tamin'ny Martsa 2012. Noesorina tao am-ponjan'i Adra nafindra tany amin'ny toerana tsy fantatra i Bassel tamin'ny Oktobra 2015. Tamin'izany fotoana izany, nilaza ny vadiny, Noura Ghazi fa “nalain'ny polisy miaramila tao amin'ny fonjany tao Adra miaraka amin'ny didy voaisy tombokasen'ny “tsiambaratelo faratampony” avy amin'ny Fitsarana Miaramila izy.
Tamin'ny 12 Novambra 2015, nitatitra i Ghazi fa nisy olona nifandray taminy izay milaza ny tenan'izy ireo fa avy amin'ny governemanta Assad ary nampahafantatra azy ny didim-pitsarana voalaza. Nanoratra tao amin'ny Facebook i Ghazi:
Vao nahazo vaovao mampanahy sy manafintohina aho fa voaheloka ho faty i Bassel. Mihevitra aho fa ny dikan'izany dia mampidi-doza tanteraka ny famindrana azy ho any amin'ny fonjan'ny miaramila. Tsy fantatro izay vaovao hafa. Ho ampian’ Andriamanitra anie izy, manantena izahay fa mbola tsy tara loatra. Manahy dia manahy ny amin'ny ainy izahay.
Raha sarotra ny manamarina izany tsaho izany, dia mbola tsy fantatra izay toerana misy an'i Bassel. Mandrisika ny fitondram-panjakana vahiny sy ny Firenena Mikambana ireo mpanohana azy mba handray fepetra ary hangataka mba hampahafantarin'ny manampahefana Syriana amin'ny fianakavian'i Bassel ny toerana misy azy ary hanome famindrampo ho azy.
Tao amin'ny Seha-Dinika Fitantanana an'Aterineto iray tohanan'ny Firenena Mikambana ao João Pessoa tamin'ity herinandro ity, nanaparitaka fanambarana mivaky toy izao ireo mpanohana azy:
Jadona ny fanagadrana an'i Bassel ary manitsakitsaka ny lalàna iraisampirenena momba ny zon'olombelona. Fampanjavonana olona ny fandavan'ny manam-pahefana tsy hilaza ny toerana misy azy. Tsy manaja ny fenitra momba ny fitsarana ara-drariny ny fanenjehana azy. Afaka ary tokony avotsotra tsy misy fepetra hikarakara ny fianakaviany i Bassel.
Nosamborina tamin'ny 15 Martsa 2012 tamin'ny tsingerintaona voalohany nanombohan'ny revolisiona Syriana i Bassel. Nalaina am-bavany sy nampijalian'ny Sampana Miaramila nandritra ny dimy andro izy. Nafindra tany amin'ny Sampana faha-248 Fanaovana Famotorana sy nogadraina mangingina nandritra ny sivy volana izy. Tamin'ny 9 Desambra 2012, nentina teo anatrehan'ny mpampanoa lalàna miaramila tsy misy mpisolovava i Khartabil ary voampanga ho “mitsikilo ho amin'ny tombontsoan'ny Firenena fahavalo”. Nalefa tany amin'ny fonja Adra ao Damaskosy izy avy eo, izay nanagadrana azy hatramin'ny vao haingana.
Tsidiho ny tranonkan'ny mpanohana an'i Bassel freebassel.org. Raha haneho fanohanana momba ny raharaha Bassel, soniavo ity fanangonan-tsonia antserasera ity; izay natomboky ny namana sady mpanao fanentanana Mohamed Najem, mitaky ny famotsorana azy avy hatrany.